Awood la liiday! ... W.Q: Yaasmiin M. Kaahin
(Hadhwanaagnews) Monday, June 11, 2018 13:22:41
Halka ay ahayd in isku duubnidooda iyo iyagu wax ay isku ogolaadaan in laga shaqeeyo na, tiro kooban oo cayiman wakhti la geliyay!
Dedan maahee daalacan, dagaal maahee waa nabad! Waa hogotus iyo tilmaan. Wax wanaagsan baa qabsoomay oo ugu yaraan dedaal muddo dheer soo socday baa midho dhalay, waanse ka aragti duwanahay dad badan oo arrintan qoonddada dumarka ee siyaasadda, gaar ahaan ka qaybgalka Baarlamaanka u bogay. Horreyso iyo horraanba, waxaan aaminsanaa, aaminsanahayna in baahida haweenka ee Somaliland ay ka mug iyo macno weyn tahay inay ‘Siyaasad ka qaybgalaan oo kaliya’. Waxaan qabaa in baahida haweenweynaha Somaliland ay muraayad u yihiin hooyooyinka fadhiya suuqyada ee aan haysan suuliyo ay galaan, inta suuli suuqa ku taallaana (Xamaamyadu) ay gaar u yihiin ragga ee aan iyaga loogu talo
gelin, dabadeed siday saaka guriga kaga soo baxday ugu noqota habeenkii – iyadoo kelyuhu xanuunayaan. Waxa humaagga baahida haweenka laga dheehan karaa inta hooyo agoon korinaysa, aqoon aan baran, ubadku ku kaliyaysteen ee il-dhaqaale raadinaysa, cid ay ku eerato na la’! Waxaan qabaa in qoonddadu tahay awooddii haweenka oo ah codbixiyaha ugu tirada badan oo la liiday. Halka ay ahayd in isku duubnidooda iyo iyagu wax ay isku ogolaadaan in laga shaqeeyo na, tiro kooban oo cayiman wakhti la geliyay!
Maba xuma oo doodda qaarkeed baa noqon karta, ‘Inay haweenku siyaasadda ka qaybgalaan waxay keenaysaa in baahiyahooda la gufeeyo!’ Haye’e, haddiiba dhankaa laga eego waxaan isweydiiyay; sifo noocma ah ayay kaga qaybgalayan? Goortee iyo goobtee ayay wax ka qaban karaan? Ma marka la mideeyo codka haweenka ee inta ugu badan ka ah codbixiyaha wax doorta ee haweenku wax isu ogolaadaan iyagu? Mise marka la helo qaabka qoonddadan ee laysla meel dhigo ciddii haweenka metelaysay? Ma waxay innaga tahay uun, ‘Yeelkeed ciddii meteshaaba’e, aynu wax cayiman uun helno’? Waa taa abbaarta aan u socdaaye, marka qoondo loo xidho haweenka, dammaanad caynkee ah ayaa loo hayaa in aan arrinku innaga noqon ‘Anigaa u daalay oo haddana qoonddadu ii dabran tahay!’ Sidee ayay suurtogal u tahay awoodda midoobi kari wayday ee codkooda intay meel isugu geeyaan soo saari waayay haween metela haweenka (Iyagoon qoondo kooban ku qancin), inay ku heshiiyaan ‘Yaa qoondadan gelaya iyo sidee loo gelayaa?’ Igama aha inaan dedaal la sameeyay, xitaa yaanan taageersanaane, aan leeyahay; waa hal bacaad lagu lisay, xaasha! Waxase aan u arkaa in oodo dhacameed siday u kala sarreeyaan loo kala guro. Waxay iga tahay in aan berri la arag intii qoondada loo xiiqsanaa in le’eg amma ka badan iyadoo loo xiiqsan yahay oo loogu muransan yahay ‘Heblaayo ayaa haweenka metesha’ iyo ‘Annaga nama metesho!’ ‘Looma dhama’ iyo ‘Anigaa metelaya ee adigu dib u joog’ oo aanay wakhti iyo tacab kale oo wax ka badan ku qabsan karno aanay innaga gelin.